SENTAfrica iyo LIVINGWAY WAXBARASHADA » Dadka
Yunus Banda – DIRAAAfrica Wakiilka for Malawi iyo agaasimaha LIVINGWAY WAXBARASHADA
Yunusu waa baadariga of a Gospel Church Full ee Malawi iyo waa hoggaamiye bulshada ee firfircoon iyo khayraad ku qaata guddiga in uu u injiilka ku qabsan daabad kasta, si dhab ah. Shuqulkiisa ka mid ah la wadaad ee Khwidzi Full Injiil Church Ilaah iyo shantii sano ee la soo dhaafay ayaa shaqaalaha waqti-buuxa ah SENTAfrica.
Waxa uu hubiyaa in LIVINGWAY WAXBARASHADA waxa ay u diiwan sharci ah aan dowliga-Organisation (NGO)ee Malawi oo waxaa kor loogu dhisayo taageerada ee ururkan ee dugsiyada. Waxa uu sidoo kale waa maamulaha ee kale DIRAA mashaariic.
Jamie JAMIESON – Agaasimaha DIRAAAfrica iyo LIVINGWAY WAXBARASHADA
Jamie aasaasay DIRAAAfrica naagtiisii, isagoo Jane iyo qotomiyey LIVINGWAY WAXBARASHADA la Yunusu. Wuxu bartay ee UK, Greece oo u shaqeeyey sidii maamulaha ah ee Addis Ababa, Itoobiya. Waxa uu tababaraha macalin ee South Africa iyo Zambia a. Iyada oo la Voluntary Service Overseas shaqeeya (VSO) oo uu ka shaqeeyay si ay u taageeraan barnaamijka tababarka macalinka-tababarayaasha ee Ethiopia. Waxa uu hadda ka shaqeeya dhinaca doctorate ah ee Waxbarashada.
CELESTINE CHIZENGA – Guddoomiyaha of Trustees for LIVINGWAY WAXBARASHADA iyo Project tababare u ah KIRADA mashruuca dhismaha
Chizenga waa maareeyaha mashruuca ee ku KIRADA Xarunta macalimiinta iyo guddoomiyaha howlaha wakiilka ah. Waxa uu yahay sarkaal ka howl gabay ciidamada oo nijaar. Oo uu ugu talagalay mashruuca hadda, go'antahay shaqada DIRAAAfrica iyo LIVINGWAY WAXBARASHADA ayaa aad u badan oo ka mahad sannadkii la soo dhaafay.
Eunice Banda - Wakiilka LIVINGWAY WAXBARASHADA
Eunice waa naagtii of Yunusu, hooyo saddex caruur ah iyo qof wakiil ah oo ka mid ah LIVINGWAY WAXBARASHADA. Waxay inuu doonayo inuu ku saabsan doorka macalinka iyo ayaa hore si iskeed ah adeegyada iyada dugsiyada iyo taageero ah DIRAAAfrica iyo KIRADA. Waxay rajaynaysaa in ay bilaabaan tababarka sida macallin sida ugu dhakhsaha badan ayay u awooddo.
Davies – Wakiilka LIVINGWAY WAXBARASHADA
Davies oo ah hoggaamiye bulshada ixtiraamo, aabbihiis u Eunice uu hadda waxaa uu yahay qof wakiil ah oo loogu talagalay LIVINGWAY WAXBARASHADA.
Wuxuu Eebe siiyey talooyin qiimo leh in KIRADA helitaanka goobta at Chitipi oo uu sii wado in uu kaa caawiyo si toos ah baryadii kaniisadda degaanka ee dhinaca shaqada laga fuliyay.
Christina – Wakiilka LIVINGWAY WAXBARASHADA
Christina ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dad badan oo kooxdan ka mid ah wakiilka isla markaana aragti ka bixinayaa iyo xigmad qaali ah oo kooxda.
Waxay tusaale Yunusu iyo kuwa kale oo sanado badan. Waxay sii waddaa in ay ka shaqeeyaan sidii maamule ka ah Howlgalka Neighbourhood ee Salima.
PONTINO – Wakiilka LIVINGWAY WAXBARASHADA
Pontino waa wadaad ah iyo qof wakiil ah oo loogu talagalay LIVINGWAY WAXBARASHADA
Pontino waa wadaad ah iyo trustee LWE. Waxa uu sidoo kale waa muxaadaro dugsiga Full Gospel Church Bible.
Pontino joogo 268 km ka fog Chipoka meesha LWE ka shaqeeyaa, laakiinse ma uusan seegay kulan uu la yeeshay xubnaha kale ee golaha. Marka Pontino furo afkiisa, aad ka fili xigmad, iyo qaybaha u fiican ee talo. Pontino waxaa sidoo kale ka tegid darteed Kasungu Degmada Wadaadada darisnimo.
ALEX – Wakiilka LIVINGWAY WAXBARASHADA
Alex waa macalin iyo qof wakiil ah oo loogu talagalay LIVINGWAY WAXBARASHADA
Waxa uu ku biiray baraya Wasaaradda ee 1995, Hadda waxa uu u barayay jooga Dugsiga Hoose ee Thugulu oo ah 5 km galbeed ee LWE Teacher Centre oo Guest House ee Chitipi. Waxa uu xubin ka LWE noqday 2012, November, oo doortay in la LWE macalinka focal. Alex ayaa waxaa dibna uu u magacaabay iyada oo loo marayo codbixinta si ay u noqon LWE Board of xubin Trustee ee March. 2013 iyo ugu dambeyntii u magacaabay inuu noqdo xoghayaha Board LWE ee December 2013.
Felix- Wakiilka LIVINGWAY WAXBARASHADA
Felix waa macalinka Head ah iyo qof wakiil ah oo loogu talagalay LIVINGWAY WAXBARASHADA
Trustee Felix LWE
Felix waa tarjume weyn oo diyaar u yahay si uu dugsiga tusaale wanaagsan oo ah sida qiyamka LIVINGWAY WAXBARASHADA la gelin karo dhaqanka.